I-Safari Technology Preview 33 manje isiyatholakala nge-MacOS Sierra ne-High Sierra | Ngivela kwa-mac
I-Safari Technology Preview 33 manje isiyatholakala nge-MacOS Sierra ne-High Sierra
Bekungeke kulahleke ephathini, izibuyekezo ezintsha zesiphequluli sokuhlola se-Apple, isiphequluli lapho abafana abavela eCupertino behlola ubuchwepheshe obusha ukuthi njengoba bedlula izivivinyo ezahlukahlukene zonjiniyela ne-Apple banamavoti wonke wokuzenza ku-macOS inguqulo yeSafari, njengakwinguqulo ye-iOS yeSafari. I-Apple ikhiphe inguqulo engu-33, inguqulo leyo singalanda njengesibuyekezo nge-Mac App Store, inqobo nje uma sikufakile. Ngaphandle kwalokho kuzodingeka sidlule kufomethi ye- isixhumanisi esilandelayo bese ulanda i-Apple's Purple Safari.
Lesi siphequluli esisha sangena emakethe ngoMashi ngonyaka owedlule futhi selokhu sabuyekezwa njalo emavikini amabili, njengoba i-Apple imemezele ukuthi izokwenza kanjalo. Lesi siphequluli sokuhlola siyatholakala mahhala ukuze noma yimuphi unjiniyela akwazi ukusifaka, ngaphandle kokuba ne-ID ye-Apple noma abe ne-akhawunti yonjiniyela, i-akhawunti ebiza u- $ 99 ngonyaka. I-Safari Technology Preview version 33 isibonisa ukuthuthuka ekuxhumaneni ne-AirPdos, iNetflix futhi izimbungulu ezijwayelekile ze-YouTbe zilungisiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » I-Safari Technology Preview 33 manje isiyatholakala nge-MacOS Sierra ne-High Sierra
ICampusMac izoba kulo nyaka eMarista Residence, eValladolid
UTim Cook ukhuluma ngezinkinga zamanje ze-Apple, enkulumweni abe nayo neBloomberg